Elele Ule Kupọns na Ego | Martech Zone
You na-akwụ ụgwọ ego iji nweta ndu ọhụụ, ma ọ bụ na-enye mwepu ego iji dọta ha? Companiesfọdụ ụlọ ọrụ agaghị emetụ Kupọns na mwepu ego n'ihi na ha na-atụ egwu ịbelata akara ha. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ dabere na ha, na-ebelata oke uru ha na-eweta n'ụzọ dị egwu. O doro anya na ha arụ ọrụ ma ọ bụ na ha arụghị. 59% nke ndị na-ere ahịa dijitalụ kwuru na ego na ngwugwu dị irè maka inweta ndị ahịa ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ego dị iche iche maka ị nweta uru dị mkpụmkpụ, ha nwere ike ibibi nsogbu gị, ma zụọ ndị ahịa ọ bụla ka ha ghara ịzụta ọnụahịa zuru ezu. Nke a apụtaghị na ụdị ekwesịghị ịbelata ma ọlị - ndị ọkaibe n'ịzụ ahịa ugbu a na-elekwasị anya na iwelata ego ha ga-eji na-emeso ha dị ka igwe ntụgharị ntụgharị. - Jason Grunberg, Sailtru
Isi ihe na-eme ka ndenye ego na ego na-anwale ha. 53% nke ndị na-ere ahịa dijitalụ na-eduzi A / B ma ọ bụ ule dịgasị iche iche. Rịba ama mgbanwe ntụgharị, ọwa ejiri, oge ana-azụ, ọnụ ahịa ahịa na ọnụ ahịa ndụ nke ndị ahịa enwetara site na Kupọns na ego
Anyị ekekọrịtala ihe niile Ndị na-ere ahịa ahịa kwesịrị ịma banyere Kupọns na usoro atumatu ego na ihe omuma mbu. Agbanyeghị, ọ niile na-agbadata ịdị iche na uru, nchikọta, na ugboro ole ị ga-ebelata ego ruo mgbe ịchọtara ngwakọta ziri ezi nke na-adọta ma na-echekwa ndị ahịa n’ebughị akụ!
Tags: nkezi iji uruọwacoupon azumKupọnsego azumdiscounting na dijitalụ afọndụ ahịa ahịandu nduOgbalatesting